Ukuthuthukisa i-SEO e-Page ukuze unikeze inani kuwebhusayithi yakho - Ucwaningo oluvela ku-Semalt
Kunoma yiliphi ibhizinisi le-intanethi, ukuthola ukwaziswa okwanele ikakhulukazi kwi-intanethi kuyisihluthulelo. Kumthengisi we-intanethi, ukubhuka ukuqina okuqinile kuma-platforms e-intanethi afana nezinjini zokusesha kanye nemithombo yezokuxhumana ngokuvamile kuyinhloso esemqoka. Lesi sigaba lapho i-Search Engine Optimization iza khona ukudlala. Umgomo wanoma yiluphi umkhankaso we-SEO ukhiqiza izinga lokuhamba nge-website yakho ye-e-commerce ngokubeka izikhundla eziphezulu ku-SERP ejwayelekile yamagama angukhiye athile. Kule ndaba, indawo ephakeme isayithi lakho livela, abantu abaningi abafuna ukucinga lawo magama angukhiye kungenzeka bachofoze ikhasi lakho - nation wide appraisal.
I-SEO Ekhasini lisiza amakhasi ukuba athole amandla kwimiphumela yosesho ngokusebenzisa izici ezinjengokukhethwa kwegama elingukhiye nokudalwa kokuqukethwe. Ikhasi lewebhu elivela kuqala linamathuba angu-99% okuthola ukuchofoza okuningi, ikakhulukazi uma okuqukethwe kusebenza. Noma kunjalo, ukwenza lo msebenzi akulula kakhulu.
uLisa Mitchell, iMenenja yokuPhumelela kweKhasimende Semalt , ichaza izindlela eziningana zokuthi ungakghona kanjani ukwandisa ikhasi lakho le-SEO:
Ukukhetha okukhethwa ngamagama
Njenganoma yiziphi ezinye izinselele ze-SEO, umsebenzi oyinhloko uthola amagama angukhiye okuncintisana.Izinhlelo zokusebenza ezifana ne-Google AdWords ne-SEMrush zingakusiza ukuthola amagama angukhiye anomncintiswano obuthakathaka. Amagama angukhiye ayadingeka ukusebenzisa kuwookuqukethwe kwewebhu. Lapha, umqondo wukuthi uma ufaka amagama angukhiye kokuqukethwe kwakho kuwebhu, ibhola le-Google crawler ibhala okuqukethwe kwakho futhilivela emiphumeleni yokusesha ye-Google esikhathini esizayo lapho umuntu echofoza kusixhumanisi sakho..Amagama angukhiye adinga ukuthi atholakale ezingxenyeni ezithile zeikhasi lewebhu ukufeza le CTR. Ngokwesibonelo, kubalulekile ukufaka amagama angukhiye esihlokweni sekhasi, incazelo ye-meta kanye nekhasiokuqukethwe ngokwayo. I-AdWords inesici esikukhombisa ukuhlaziywa kwamamethrikhi nokulinganisa kokusebenza kwamagama akho angukhiye.
Okuqukethwe kufanele kufaneleke ku-niche oyibhekisayo. Kufanele kube khona kube ukubekwa okufanele kwamagama angukhiye kuleli khasi. Okuqukethwe kufanele kube nobude obuhle, kuye ngokuthi ukubukwa kwedeskithophu noma ukubukwa kweselula.Qinisekisa ukuthi awunayo okuqukethwe okuphindaphindiwe ekhasini olungiselelayo. Okuqukethwe okuphindaphindiwe kufaka ama-URL amaningi, ukunciphisa ikhasi igunya kanye nesimo.
Ukuze i-Google ibeke ikhasi, kufanele liphendule, likwazi ukuhamba ngomakhalekhukhwini futhiokuqukethwe okufanelekile. I-Google algorithm imiklomelo ngamakhasi ngenhloso yomsebenzisi nesipiliyoni. Kufanele udale ikhasi lewebhu elisebenzela umsebenzisi isikhathi esithile, kulula ukuyisebenzisa kanye nomunye ngejubane lokulayisha okusheshayo. Kufaka phakathi ukuxhuma kokuxhumana kwezokuxhumana kanye namavidiyo kungaba yinto eyengeziweinzuzo.
Kuzo zonke iziqalo zokuqala ku-intanethi, inani elithile lokudayiswa kwe-digital kubalulekile.Izinkampani eziningi zamukela amasu we-SEO futhi ziphumelele ekwenzeni amakhasimende amaningi avela elula ekhasini le-SEO nemisebenzi ye-website design. Ukuphumelelaonline, okubaluleke kakhulu ekhasini SEO izici zidinga ukunamathela okuqinile. Isibonelo, abasebenzisi bangathola ukugeleza okuqhubekayo kwe-traffic kusuka kwegama elingukhiyeukukhethwa kanye nokuzuza kusukela ekuguqulweni okuphezulu kwempumelelo ye-SEO. Ngemuva kokusebenzisa iziqondiso ezingenhla, inthanethi yakhoukumaketha kungaba nesithelo kakhulu. Lezi zeluleko azisebenzisi nje kuphela ukuthola izivakashi eziningi kodwa futhi zidlala indima esizukulwaneni esiholela phambili njengoba uguqula izivakashi kuba abathengi.